Taunggyi Times (တောငျကွီးတိုငျးမျ): မျိုးချစ်စိတ်နှင့် အမှန်တရား
အမြင်နှင့်ပေးစာကဏ္ဍ | သစ္စာရှင်(တောင်ကြီး) | ဇွန်လ ၃ ရက်၊ ၂၀၁၃ ခု | တောင်ကြီးတိုင်းမ်
ပအိုဝ်းမျိုးချစ်လူငယ်တစ်ယောက်ဟု ဆိုကာ မျိုးချစ်စိတ်ဖြင့် ဖြေရှင်းလာသည့် ခွန်ပအိုဝ်းကို လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ကြိုဆိုပါသည်။ သို့သော် အရာရာတိုင်းကို ဖြေရှင်းရာတွင် အမှန်တရားကို ရှေ့တန်းတင်နိုင်ပါမှ ကောင်းပါသည်။ တကယ့်အမှန်တရားကို မရှာဖွေပါဘဲ မျိုးချစ်စိတ် တစ်ခုတည်းဖြင့် မျက်စိစုံမှိတ်ပြီး ဖြေရှင်းမည်ဆိုလျှင် ဖြေရှင်းရာ မရောက်ဘဲ အတင်းဇွတ်ငြင်းရာ ရောက်ပါသည်။ ထိုမျိုးချစ်စိတ်မျိုးကိုလည်း မျက်ကန်းမျိုးချစ်စိတ်ဟုသာ အမည်နာမ တပ်ပြောရပေမည်။
PNO အဖွဲ့ ကြာရှည်စွာ ရပ်တည်နေနိုင်ခြင်းသည် ထိုသို့သော ပအိုဝ်းလူထုအများစု၏ မသိနားမလည်မှုနှင့် မျက်ကန်းမျိုးချစ်စိတ်ဓာတ်များကြောင့် ဖြစ်သည်။ ပအိုဝ်းလူထုကို လူကြီး လူငယ်ဟူ၍ နှစ်မျိုးခွဲနိုင်ပါသည်။ ထိုနှစ်မျိုးတွင် လူကြီးပိုင်းအများစုသည် နိုင်ငံရေးအမြင်၊ လူ့အခွင့်အရေးအမြင်၊ ဥပဒေအမြင်များတွင် အလွန် အားနည်းသည်ဟု ဆိုနိုင်ပါသည်။ အချို့သော သက်ကြီးရွယ်အိုများဆိုလျှင် PNO ကို နိုင်ငံ့အကြီးအကဲအဖြစ် ထင်မှတ်နေကြပြီး ကိစ္စအရပ်ရပ်တွင် PNO ပြီးလျှင် ပြီးရသည်။ PNO သည်သာလျှင် နိုင်ငံ့သခင် နိုင်ငံအစိုးရဟု ထင်မှတ်နေကြလေသည်။ ဥပဒေဆိုသည်မှာ သူတို့မသိ၊ အမှန်တရားဆိုတာ သူတို့မသိ။
ကျေးရွှာနေ ပအိုဝ်းလူထုအများစုမှာ စာတတ်အား မနည်းလှသော်လည်း စာဖတ်အားကမူ နည်းသည်ဟု ဆိုနိုင်သည်။ တောင်ယာများ လုပ်ကိုင်၍ စိတ်ရှုပ်မခံလိုသူများ ဖြစ်ကြသည်။ ပညာတတ်ဘွဲ့ရ ပအိုဝ်းလူငယ် မောင်မယ်များမှာ ပအိုဝ်းလူဦးရေနှင့် နှိုင်းယှဉ်လိုက်လျှင် အတော့ကို နည်းနေသေးသည်။ ဗမာစကား မတတ်သော လူလတ်ပိုင်း လူကြီးပိုင်းများပင် ဒုနဲ့ဒေး ရှိနေသေးသည်။ ဤအချက်သည်ပင် PNO က ပအိုဝ်းလူထုကို လုပ်ချင်တိုင်း လုပ်နိုင်သောအချက်ဟု ဆိုနိုင်လေသည်။
PNO သည် ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီ၏ လက်အောက်ခံပါတီတစ်ခုလို ဖြစ်နေခဲ့ပြီး တောင်ကြီးတစ်ကြောတွင် နားလည်မှုဖြင့် အာဏာကို ခွဲဝေကျင့်သုံးကြသည်ဟုလည်း ဆိုနိုင်သည်။ တစ်နည်းဆိုရလျှင် ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီက PNO ကို အသုံးချခဲ့သည်ဟုလည်း ပြောနိုင်ပါသည်။ ပြီးခဲ့သော ၂၀၁၁ ရွေးကောက်ပွဲတွင် ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီ၌ သြဇာအာဏာရှိပြီးသား ပအိုဝ်းလူကြီးများကို ထည့်သွင်း၍ ပအိုဝ်းလူထုကို တစ်ဘက်လှည့်ဖြင့် ဖိအားပေး ခဲ့သည်။ (ဤအချက်များကြောင့် ခွန်ပအိုဝ်းပြောသလို ပြန်ပြောရလျှင် ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီ ၀င်ရောက်လာမှ ပအိုဝ်း တိုင်းရင်းသား အချင်းချင်း စိတ်ဝမ်းကွဲကြရသည်။ NLD ကြောင့် ပအိုဝ်းတိုင်းရင်းသားများ စည်းလုံးညီညွတ်မှု ပြိုကွဲရသည်ဟု ခွန်တန်ပအိုဝ်းအနေဖြင့် လက်ခံယုံကြည်သည်ဆိုလျှင် ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီကြောင့် ပအိုဝ်းလူထုတို့ အကြား သွေးကွဲခဲ့ရသည်ကိုလည်း လက်ခံယုံကြည်ပေးနိုင်ရမည်။)
PNO ကို ပအိုဝ်းလူထုများက ချစ်ခင်မြတ်နိုးရမည့်အစား ခုနောက်ပိုင်းများတွင် ကြောက်ရွံ့မှုသာ ပိုများ လာခဲ့သည်။ PNO ကို ပအိုဝ်းလူထုများ ကြောက်ရွံ့ခြင်းသည် စစ်အစိုးရလက်ထက်တွင် ပြည်သူက စစ်အစိုးရ ကို ကြောက်ရွံရသည်နှင့် သိပ်မခြားနားလှချေ။ ဆိုးဆိုးဝါးဝါး သိသိသာသာ ဖြစ်မလာခြင်းမှာ ပညာတတ် ပညာရှိ ပအိုဝ်းဆရာတော်များ၏ အရှိန်အ၀ါ ရှိနေခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။ ဆရာတော်ကြီးများသာ မရှိပါလျှင် ယခုထက် ပိုဆိုးလာနိုင်သည်ဟု ဝေဖန်သူများလည်း ရှိသည်။
ခွန်ပအိုဝ်းက PNO တို့၏ လုပ်ဆောင်ချက်ဟု ဆိုကာ နံပါတ်စဉ်ဖြင့် ရေးသားတင်ပြလာသည်မှာ အလွန်ကောင်းလှပါသည်။ လိုလည်းလိုအပ်ပါသည်။ သို့သော် ထိုဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့သော ဆေးရုံ ဆေးခန်း စာသင်ကျောင်း စသည်တို့သည် မည်သည့်အချိန် မည်သည့်အရပ် မည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ် မည်မျှသော ငွေကြေးတို့ဖြင့် ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့သနည်း။ အသေးစိတ်တင်ပြနိုင်လျှင် လက်ခံနိုင်ပါသည်။ PNO အနေဖြင့် တရားဝင် တိတိကျကျ ထုတ်ပြန်ပေးနိုင်လျှင် အကောင်းဆုံးဟု ဆိုရပါမည်။ ကျွန်ုပ်နှင့် ရင်းနီးသော သူငယ်ချင်းကမူ သူ့၏ဇာတိရပ်ရွာ၌ ငယ်စဉ်တောင်ကြေး ကလေးဘ၀မှစ၍ ယခုအသက် သုံးဆယ်ကျော် သည့်တိုင်အောင် PNO အနေဖြင့် လုပ်ပေးသည့်အရာကို မတွေ့ဖူးသေးကြောင်း ပြောပြပါသည်။
သို့ဖြစ်ရာ ခွန်ပအိုဝ်းတင်ပြသော လုပ်ဆောင်ချက်များမှာ စစ်အစိုးရလက်ထက် နည်းနာအတိုင်း အပေါ်ယံ နှမ်းဖြူးခြင်းမျိုး ဖြစ်နေမည်လားဟု သံသယဖြစ်စရာ ကောင်းပါသည်။ ကိုယ်ထူကိုယ်ထ ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုး၍ လုပ်ထားသည်ကို ဟန်ပြသွားရောက်ဖွင့်လှစ်ခြင်းမျိုးကို လုပ်ဆောင်ချက်ဟု မဆိုနိုင်ပါ။ အချိန်တန်မှ ဖဲကြိုး လေးကို ကတ်ကြေးဖြင့်ဖြတ်၍ လက်ခုပ်တီး ဖွင့်လှစ်ပေးခြင်းမျိုးကို လူတိုင်းလုပ်နိုင်ပါသည်။ သူကြီးဘုရား ရွာသားကောင်းမှု ဆိုသည့်ဆိုရိုးကိုလည်း သတိပြုသင့်ပါသေးသည်။
ခွန်ပအိုဝ်းက သစ္စာရှင် ကျွန်တော်၏ ဆောင်းပါးကို ပြန်လည်ဖြေရှင်းရာတွင် ထီဟန်ဆွေးကိစ္စ၊ ဆိုက်ခေါင်ကိစ္စ၊ ၀င်းယကိစ္စ(သားသတ်ရုံများကိစ္စ)၊ လျပ်စစ်မီးကိစ္စတို့ကိုမူ တစ်ခွန်းတစ်လေမျှ ငြင်းချက်ထုတ် မထားခြင်းမှာ မှန်ကန်ကြောင်း ၀န်ခံရာရောက်သလို PNO လူကြီးအများစုက အိမ်ကြီးအိမ်ကောင်း ကားကြီး ကားကောင်း မယားကြီး မယားငယ်တို့ဖြင့် အပျော်ခုတ်နေသည့် ကိစ္စကိုလည်း တစ်ခွန်းတစ်လေမျှ ဖွင့်ဟ မလာခြင်းမှာ ဘာကိုကြောက်နေရသနည်း။ မျိုးချစ်စိတ်တစ်ခုတည်းဖြင့် အမှန်တရားကို ဖုံးကွယ်ရန် မကြိုးစားသင့်ပါ။ အမှန်အတိုင်း ဝေဖန်ထောက်ပြသူများရှိမှ ခေါင်းဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်များ မကောင်းမှု မလုပ်ဝံ့မည် မဟုတ်ပါလား။ ကျွန်တော့အနေဖြင့်မူ ကျွန်တော်ရေးသောဆောင်းပါး မှန်မမှန် တောင်ကြီး၌နေသူ အများစု သိကြပါသည်။ ဖင်ပိတ်၍ ငြင်းခုံခြင်းမျိုးကိုတော့ မလိုလားပါ။ လျပ်စစ်မီးကိစ္စသည်လည်း အတော်အတန် လည်လည် ၀ယ်ဝယ် ရှိသော ပအိုဝ်းလူငယ်တိုင်းကို မေးကြည့်နိုင်သည်။ တောင်ကြီးနှင့် ကျောက်တစ်လုံးကြားရှိ ရွာသားများ ဖြစ်ဖို့တော့ လိုပါသည်။
မြေကိစ္စနှင့် ပတ်သက်လျှင်လည်း စာဖတ်သူများနှင့် ခွန်ပအိုဝ်းဆိုသူတို့ အထူးသတိပြု စဉ်းစားသင့်သည့် အချက်တစ်ချက် ရှိပါသည်။ ၎င်းမှာ PNO အဖွဲ့အစည်းကြောင့် ပအိုဝ်းလူထု ပေါ်ပေါက်လာရခြင်းလော၊ ပအိုဝ်းလူထုကြောင့် PNO အဖွဲ့အစည်း ပေါ်ပေါက်လာရခြင်းလော။ (PNO နှင့် မောက်စံကျေးရွာ မည်သူက အရင်ကျမည်နည်း)၊ တစ်နည်းဆိုရလျှင် PNO နှင့် ပအိုဝ်းလူထု မည်သူက ရှေ့ကျသနည်း။ လူထုနှင့်ပါတီ မည်သူက မည်သူကို အကျိုးပြုရမည်နည်း၊ အဦးဆုံးအနေဖြင့် မည်သူက မည်သူ့ကို အားကိုးရမည်နည်း၊ (မည်သူဆီက မဲကို မည်သူက ရလိုသနည်း)၊ အာဏာအနေဖြင့် ကြည့်လျှင်လည်း မည်သူအာဏာ ရှိသနည်း၊ ဤမေးခွန်းတို့ကို သမာသမတ်ကျစွာ ဖြေတတ်လျှင် သစ္စာရှင် ကျွန်ုပ်၏ဆောင်းပါး မှန်မမှန် သိနိုင်ပါသည်။
ကြားဖြတ်ပြောပါရစေ၊ ကျွန်တော်သည် PNO ဂုဏ်သိက္ခာကို ကျစေလိုသော စိတ်ဆန္ဒထက် PNO များ အသိတရားရှိပြီး ဆင်ခြင်စေလိုသောဆန္ဒ၊ ပအိုဝ်းလူငယ်ထုတို့ကို ထောက်ပြပေးလိုသောဆန္ဒသာ ပိုများကြောင်း ပြောလိုပါသည်။
PNO ဆိုသည်မှာ ပအိုဝ်းလူထုကြောင့်သာ ပေါ်ပေါက်လာရခြင်းဖြစ်၍ ပအိုဝ်းလူထုအနေဖြင့် အာဏာရှိသူ PNO ကို မတရား အပုပ်ချရဲမည် ချလိုမည် မဟုတ်ပေ။ မတရားမှုများ ဆက်တိုက်ကြုံလာရ၍သာ ယခုကဲ့သို့ ဝေဖန်ပြောဆိုလာရခြင်းဖြစ်ကြောင်း ခွန်ပအိုဝ်းနှင့် PNO တို့ သတိပြုသင့်သည်။ မတရားမှုတို့ကို မကြိုက် မနှစ်သက်သော PNO ထဲက လူတစ်ချို့သည်လည်း သည်ကိစ္စမျိုး ထပ်ထပ်မဖြစ်အောင် ပြောဆိုဝေဖန် ထောက်ပြသင့်သည်။ PNO ကို ဂုဏ်သိက္ခာရှိရှိ ကြာရှည်ရပ်တည်စေလိုလျှင် အမုန်းခံပြောဝံ့သူ လိုအပ်သည်။ ဦးအောင်ခမ်းထီ ဦးဆောင်စဉ် အချိန်ကဲ့သို့ ကောင်းသတင်း ကောင်းခြင်းများနှင့် ပြည့်စုံအောင် ၀ိုင်းဝန်းလုပ် ဆောင်ကြဖို့ လိုပါသည်။ လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသူတို့ လုပ်နိုင်သူတို့ လုပ်ကြမှသာ PNO ဂုဏ်သိက္ခာလည်း မြင့်မားရမည် ဖြစ်သလို ပအိုဝ်းလူထုလည်း မျက်နှာမငယ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။ ဤကား စေတနာရင်းဖြင့် အကြံပြုခြင်းဟု ဆိုပါရစေ။
နောက်ထပ် ရှင်းချင်သေးသည်မှာ ခွန်ပအိုဝ်းက PNA/PNO ပိုင်သောမြေတွင် ရွာသားများက ၀င်ရောက် ကျူးကျော်ခြင်းဟု ဆိုသည်။ ယုတ္တိသဘာဝကျကျ စဉ်းစားစေလိုသည်။ PNO နှင့် ရွာသား မည်သူက အာဏာ ရှိသနည်း။ အာဏာရှိသူနှင့် အာဏာမဲ့သူတို့ မည်သူက မတရား ပြုနိုင်သနည်း။ အာဏာမဲ့သူတို့က အာဏာရှိသူ ကို စော်ကားဝံ့မည်လား။ အာဏာရှိသူတို့ကသာ အာဏာမဲ့သူတို့ကို နိုင်စားလေ့ရှိကြောင်း လူတိုင်းသိနိုင်ကြ လေသည်။ သို့သော် ထိုသို့ သိသူများထဲတွင် ခွန်ပအိုဝ်းဆိုသူ မပါဝင်ခြင်းမှာ ဘယ်အရာက နားမျက်စိကို ပိတ်ဆို့နေသနည်း။
နောက်တစ်ခုမှာ ခွန်ပအိုဝ်းက NLD အနေဖြင့် ပါတီဝင်ရရှိရေးအတွက် သက်ဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်များ၊ အဖွဲ့အစည်းများ အကြောင်းကြားခြင်း အသိပေးခြင်း မရှိဘဲ ကွင်းဆင်းစည်းရုံးသည်ကို ရပ်ရွာအေးချမ်းမှု ပျက်ပြားအောင် လုပ်သည်ဟု ဆိုလာသည်။ ခွန်ပအိုဝ်း ပြောသလိုဆိုလျှင် လက်ရှိအာဏာရှိသူတို့ သဘော မတူလျှင် ကာယကံရှင် သဘောတူသည်ဖြစ်စေ ပါတီဝင်အဖြစ် မစည်းရုံးရ၊ ပါတီဝင်အဖြစ် မသွင်းရဟု အဓိပ္ပါယ် ရောက်နေပါသည်။
ထို့အပြင် NLD က တောင်သူများ၏ ခြံမြေယာပေါ်တွင် ၀င်ရောက်ကျုးကျော်သည်ဟု ရေးသားထားသည်။ ဟုတ်မဟုတ် တစ်နိုင်ငံလုံး သိကြသည်။ NLD များ မြေသိမ်းသည်ဟု မည်သည့်ဂျာနယ် မည်သည့် စာစောင်တွင်မျှ မတွေ့ရဘဲ မြေကိစ္စနှင့် ပတ်သက်လျှင် PNO သည်သာ တစ်နေရာပြီးတစ်နေရာ သတင်းထွက် နေလေသည်။
ခွန်ပအိုဝ်းဆိုသူ၏ ဆောင်းပါးတွင် ဆိုးဝါးလွန်းသည်ဟု ဆိုနိုင်သည့်အချက်မှာ NLD ကပင် ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲတွင် အနိုင်ရရေးအတွက် PNO ကို ဂုဏ်သိက္ခာ ကျဆင်းအောင် လုပ်ဆောင်နေသည် ဆိုသော အချက်ဖြစ်၏။ ဟုတ်မဟုတ် စဉ်းစားနိုင်ရန် အနည်းငယ် ပြောလိုပါသည်။ NLD နှင့် PNO ပါတီ မည်သူက အင်အားကြီးပါတီ ဖြစ်သနည်း။ မည်သူက မည်သူ့ကို ဂုဏ်သိက္ခာ ကျဆင်းအောင် လုပ်ဆောင်လျှင် အကျိုးပို ရှိသနည်း။ PNO ဂုဏ်သိက္ခာ ကျဆင်းအောင် လုပ်ဆောင်ခြင်းထက် NLD ဂုဏ်သိက္ခာ ကျဆင်းအောင် လုပ်ဆောင်လျှင် ပို၍အကျိုး မရှိပါသလော။ မနာလိုခြင်း ဖြစ်မည်ဆိုလျှင်လည်း အားကြီးသူက မိမိအောက် နိမ့်ကျသူကို မနာလိုဖြစ်ခြင်း မရှိပေ။ အားနည်းသူကသာ အားကြီးသူကို မနာလို အပုပ်ချလိုလေ့ ရှိသည်မှာ ဓမ္မတာ ဖြစ်ပါ၏။ ထို့ကြောင့် NLD ကိုသာလျှင် အခြားအဖွဲ့အစည်း ပါတီတို့က ဂုဏ်သိက္ခာ ကျဆင်းအောင် ပြုလုပ်လိုဖွယ်၊ ပြုလုပ်နိုင်ဖွယ် များပါသည်။
နောက်ဆုံးပြောလိုသည်မှာ ခွန်ပအိုဝ်းအနေဖြင့် အမှန်တရားနှင့် မျိုးချစ်စိတ်ဓာတ် မည်သည့်အရာကို တန်ဖိုးပိုထားမည်နည်း။ အမှန်တရားထက် မျိုးချစ်စိတ်က ပို၍အရေးကြီးသလော။ မျိုးချစ်စိတ်ထက် အမှန် တရားက ပို၍အရေးကြီးသလော။ မည်သည့်အရာကို ပို၍ တန်ဖိုးထာသင့်သနည်း။ မည်သည့်အရာက ပိုမိုမြင့်မြတ်သနည်းဟုသာ မေးလိုက်ချင်ပါသည်ခင်ဗျာ။
မှတ်ချက်။ PNO နှင့် PNA တစ်သဘော တစ်ဝါဒချင်း အတူတူဟု မှတ်ယူသောကြောင့် PNO ဟုသာ သုံးလိုက်ရပါသည်။
သစ္စာရှင် ဟူသည် ကားမည်သူနည်း မသိပါ သို့သော် တစ်ခုပြောချင် သည် ကား ခင် ဗျားသည်လည်း အ ကြောင်းအရာများကို သေချာစွာလေ့လာပြီးမှရေးလျင်ပိုကောင်းမည် ဟုအကြံပေးချင်ပါသည် သို့မဟုတ်ပါက အများရယ်ချင် စရာဖြစ်တော့သည် ။ PNO အ နေဖြင့် လူထုအတွက် ဘာတွေလုပ်ခဲ့သည် ဆိုသည်ကို လူထုများသာ သိပေသည်။ သူများပြောသမျ လိုက်မ ဖြေရှင်းနိုင် ပါ။ စကားတစ်ခွန်း ရှိပါသည် ဘာဖြစ်တိုင်း ဘာထလုပ် ရင်တော့ ဘာဖြစ် ရုံသာရှိတယ်ဆိုတာလေ ။ နောက် ပြီးတော့ ကိုယ်ထူကိုယ်ထ လုပ်တယ်ဆို အဲဒီလိုလုပ်နိုင်အောင် ဘယ်လောက်ထိ စည်းရုံးရတယ်ဆိုတာကောခင် ဗျားသိလား။ အဲဒီလိုမလုပ်ပဲ ဒါဟာအစိုးရရဲ့အလုပ်ဆိုပြီး ထိုင်စောင့်နေမယ်ဆိုရင်တော့ဖြင့် ယ နေ့ခေတ် ပညာတတ် လူငယ်ဆိုတာ ဘယ်နားနေကြမယ်ဆိုတာ စဉ်းစားကြည့်ပေါ့။ အဲတော့ ကိုယ်ရင်းလိုက်တာဟာ အမြတ်ဖြစ်မယ်ဆို ရင်တော့ ရင်းခိုင်းသင့်တယ်လို့ကျုပ်ထင် တယ်။ ဘယ်သူကမှ ကိုယ်ပြည်သူတွေကို ထမင်းငတ်စေ ဆိုပြီးမလုပ်ပါဘူး။ လုပ်ခိုင်းတယ်ဆိုတာ အကျိုးရှိလို့ပါ။ လျပ်စစ်မီးဆိုတာလဲဒီလိုပါပဲ တိုင်းပြည်တစ်ခု လူမျိုးတစ်ခုတိုးတက်ဖို့ဆိုတာ လျပ်စစ်မီးဆိုတာလည်း အရေးကြီးတယ်ဆိုတာခင်ဗျားသိမှာပါ။ ခင် ဗျားကလူပြိန်းမှမဟုတ်တာနော။ ဒါကို အစိုးရရဲ့တာဝန် အစိုးရကလုပ်ပေးမယ် ဆိုပြီးစောင့်နေရင်တော့ဖြင့် ပအိုဝ်းတွေ အ မှောင် ထဲမှာဘယ်လောက်ထိထပ်နေရမယ်ဆိုတာ စဉ်းစားမိကြလား။ ဒီလိုလုပ်တာကို လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖေါက်တယ် လို့ပြောတဲ့လူက ဘာရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပြောတယ်ဆိုတာ သူတို့သာလျင်သိနိုင် မှာပါ။ီးလိုလုပ်တာဟာ ပအိုဝ်းလူမျိုးတွေကို မျက်စိပိတ်နားပိတ် ဘ၀ကိုရှည်ကြာအောင် လုပ်နေတယ်ဆိုတာ သိကြပါရဲ့လား။ သိသိကြီးနဲ့နမည်ကြီးချင်လို့လုပ်နေတာလား။ နာမည်ကြီးချင်ရင် အဆိုတောပဲလုပ်လိုက်ကြပါ။ ပိုလွယ်တယ်လို့ အကြံပေးချင် ပါတယ်။ ခင် ဗျားလည်း ဘေးထိုင် ဘုပြောမလုပ်ပဲနဲ့ သူများဘာတွေလုပ်နေလဲဆိုတာ သေချာလေ့လာ ပြီးရင်ဝိုင်းကူဖို့ကြိုးစားလိုက်ပါ။ နောက်တစ်ခုက PNO / PNA ဆိုတာသာမရှိခဲ့ရင် ဘာမှမလုပ်ခဲ့ရင် ပအိုဝ်းကိုယ်ပိုင် အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသဆိုတာ ရှိလာမယ်လို့ခင် ဗျားထင်လလား။ ပအိုဝ်းလူမျိုးဆိုတာ ဘာဖြစ်နေမယလို့ခင် ဗျားထင် လဲ စဉ်းစားကြည်ပါ။ တွေးကြည့်ရင် ရေးရေးပေါ်ပါလိမ့်မယ်။ ခင် ဗျားစဉ်းစားလို့ညဏ်မီမှာပါ။ ဒါပါပဲ။
ဒေါင့်စုံအမြင်တွေ တင်ပြကြတာ ကောင်းတယ်။ ဘယ်သူမှ ဘယ်ပါတီမှ အကုန်မမြင်နိုင် အကုန်မကောင်းနိုင်ပါဘူး။ ကောင်းစေလိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့ တင်ပြဖို့ကအရေးကြီးတာပါ။ ဒါမှ ဘက်စုံအမြင်တွေရကြ ပြုပြင်နိုင်ကြ လုပ်ဆောင်နိုင်ကြမှာပေါ့။ (စာဖတ်သူများက ချင့်ချိန်ဖတ်ပါ့မယ် ချင့်ချိန်လက်ခံယူပါ့မယ်။/ စေတနာဆိုးနဲ့တော့ မရေးကြနဲ့ပေါ့)
သစ္စာရှင် ဆိုသူသည် NLD ကိုသာ အကောင်းမြင်သော သူသာဖြစ်ပေသည်..
ယနေ့ NLD ဘာဖြစ်နေလဲ အရင်ဆုံး လေ့လာကြည့်ပါ... ဘယ်သူ့အတွက် ရပ်တည်ပေးနေသလဲ...တိုင်းတစ်ပါးမှ ကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာသော ဘင်္ဂါလီမွတ်ဆလင်များဖက်က ရပ်တည်ပေးနေကြောင်း ကြည့်တတ်ရင်အထင်အရှားမြင်နိုင်ပေသည်..
သစ္စာရှင်-ဆိုတာ ဘွဲ့ရ စာတတ်ပေတတ်ပုဂ္ဂိုလ်ပါ (ပညာရှိတော့ ဟုတ်ဟန်မတူ)၊ သေချာတာ တစ်ခုတော့ သူဟာ မျက်ကန်း ဆွေချစ်မျိုးချစ်ပါ (ဆွေတော်မျိုးတော် ကောင်းစားရေးပေါ့)၊ နောက်ပြီး သူဟာ သပ်လျှိုတစ်ယောက်ဆိုတာကိုလည်း သိရတယ်၊ (သူလျှိုမဟုတ်ဘူးနော်.. သပ်လျှိုပါ) ဟိုလူ့သင်းကွဲအောင်လုပ်၊ ဒီလူ့သင်းကွဲအောင် ကြိုးစားတတ်တဲ့ လူစားပေါ့၊ ဟုတ်မဟုတ်ဆိုသည်ကိုတော့ ကာယကံရှင် အသိဆုံးပါ။ ဒီလိုလူစားမျိုးကို ပအိုဝ်းပြည်သူအပေါင်းတို့ သတိထားကြပါကုန်။ သပ်လျှိုတဲ့ နေရာမှာ အင်မတန်တော်တယ်ဗျ၊ ခေတ်စာတတ်ပေတတ်ပေကိုး.....
သစ္စာရှင်-ဆိုသူသည် ပအိုဝ်းထဲမှာ ရှာမှရှား ခေတ်ပညာဘွဲ့ရ စာတတ်ပေတတ်ပါ (သို့သော်) ပညာရှိတော့ ဟုတ်ပုံမပေါ်။ သပ်လျှိုတစ်ယောက်လည်း ဖြစ်တယ် (သူလျှို- မဟုတ်ပါ)၊ ဟိုလူ့သင်းခွဲ ဒီလူ့သင်းခွဲတတ်တဲ့ သပ်လျှိုပုဂ္ဂိုလ်။ မျိုးချစ်စိတ်ဓာတ်အပြည့်ရှိတယ် (မိမိလူမျိုး တစ်မျိုးသားလုံးကိုတော့ တကယ်ချစ် မချစ် မသိသော်လည်း) သေချာတာက သူ့ဆွေတော်မျိုးတော်တစ်စုကိုတော့ မှားမှားမှန်မှန် အသေအလဲ ချစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ် အဲသလို အဲသလို ဂုဏ်အပေါင်းနှင့် ပြည့်စုံတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ ပအိုဝ်းပြည်သူအများ သတိထားကြပါကုန်လို့ဘဲ ပြောချင်ပါတယ်။
ဆိုးကွက်တွေကိုသာဖေါ်ပြတတ်ပြီး ကောင်းကွက်ကိုမဖေါ်ပြတတ်တဲ့သူ(လူဆိုးလူမိုက်)/ ကောင်းကွက်ကိုသာဖေါ်ပြတတ်ပြီး ဆိုးကွက်ကို မဖေါ်ပြတတ်တဲ့သူ(လူဖားလူမိုက်)/ ကောင်းကွက်ကိုရော ဆိုးကွက်ကိုပါ ပြောပြသင့်တဲ့အခါမှာ ပြောပြတတ်တဲ့သူ(လူတော်လူကောင်း)/ အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်သုံးမျိုးထဲက သစ္စာရှင်ဟာ ဘယ်အမျိုးထဲလည်းဆိုတာ စာဖတတ်သူများကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်တော်မူကြပါရန် အသိပေးလိုက်ပါတယ်။
- ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၃-မေလ-၂၆-ရက်နေ့တွင် တောင်ကြီးတိုင်းတွင် ပါရှိသော ဆောင်းပါးရှင် သစ္စာရှင်(တောင်ကြီး ) သိစေ ရန်ရည်ညွန်း၍ ဤ ဆောင်ပါးဖြင့် ပြန်လည် တုန့်ပြန် ရေးသားလိုက်ပါတယ်၊
- ပအိုဝ်းလူမျိုးများသည် လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်းများစွာမှ စတင်ပြီး ဤမြေဤရေဤဒေသ သို့ ရောက်ရှိ နေထိုင်ခဲ့သည်မှာ လူတိုင်းအသိပင်ဖြစ်တယ်၊ ဒါပေမဲ့ ကံကြမ္မာမုန်တိုင်းကြောင့် ခေတ်အဆက်ဆက် အုပ်ချုပ်သူများ၏ ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ် မှုကြောင့် မထင်မရှားဘ၀ဖြင့် မိမိလူမျိုး တိမ်မြုပ်ပျောက်ကွယ်မှု မရှိရလေအောင် နည်းလမ်းမျိုးစုံ ဖြင့်ဘ၀ကိုကြံ့ကြံ့ ခံလောကခံကိုရင်ဆိုင်ပြီူ အမျိုးဘာသာ၊ သာသနာကို ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်လာခံ့ သည်မှာယနေ့တိုင် အောင်ပင်ဖြစ်တယ၊၊ ဒါပေမဲ့ အချို့ သောလူ ပုဂ္ဂိုလ် များသည်ပအိုဝ်းလူမျိုးစု များ၏ ဖြစ်တည်မှု နှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို မလိုလားသည်မှာ လောက ဓမ္မတာ ပင်ဖြစ်တယ်၊ ဤမနာလို မရှု့စိမ့်နိုင်သော လူပုဂ္ဂိုလ်အချို့သည် ပအိုဝ်းအမျိုးသား များ၏ စည်းလုံး ညီညွတ်သော အခြေအနေ၊ နိုင်ငံရေးအရ အမြင်ကျယ်လာပြီး လူမျိုးတစ်မျိုး၏ တန်းတူရည်တူ အခွင့်အရေး၊ ကိုယ့်ကံကြမ္မာ ကိုယ်ဖန်တီးနိုင်သော အခွင့်အရေး စသည့် ဖြစ်စဉ်များသည် ဧကန်မလွဲပေါ်ပေါက်လာမည်ဖြစ်ပါသဖြင့် နိုင်ငံရေးအရ ၄င်း စစ်ရေးအရ၄င်း သပ်သျှို ဖြိုခွဲဖို့ ဖြစ်လာမည်မှာ ပအိုဝ်းတိုင်းသတိ ချပ်စေချင်တယ်။ ဒီလိုမှမပာုတ်ဘဲ သွေးခွဲလိုသူများ နှင့် ပအိုဝ်းလူမျိုးစု ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် လာမည်ကို မလိုလားသည့် လူပုဂ္ဂိုလ် အချို့ ၊ ပါတီ အဖွဲအစည်းအချို့ ၏ အကြိုက် ဖြစ်လာပေမည်မှာ ဧကန်မလွဲ ဖြစ်လာတော့ မည်ဆိုတာသတိကြီးကြီး ထားဖို့လိုပါတယ်။
- သစ္စာရှင်(တောင်ကြီး) ၏ အမြင်ဆောင်းပါး ပါအချက်များမှာ သစ္စာရှင် (တောင်ကြီး) ဖြစ်သူသည် အခြား လူမျိုး ဖြစ်ပါက မိမိဘာမှ မပြောလိုသော်လည်း ပအိုဝ်းလူမျိုး ထဲမှ ပအိုဝ်းဖြစ်နေ ပါလျှက် အလိုလို အမျိုးသားကို သစ္စာဖောက်သော လူဖြစ်တယ်လို့ စာရေးသူ မြင်မိပါတယ်၊ သည်လောက် PNO ကိုသိက္ခာကျအောင် ပြိုကွဲအောင်ေ၇းသားနေပုံထောက်ပါက အဆိုပါ သစ္စာရှင်သည် တချိန်က PNO အပေါ် အမြင်မကြည်လင်သော သူ (သို့) ပအိုဝ်းတိုင်းရင်းသားများ ၏ ထောက်ခံမှု မရသဖြင့် အမတ်မဖြစ်လိုက်သူ (သို့) အမတ်ရူးရူးနေသူ(သို့) နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံရဲ့ငွေကြေးထောက်ပံ့မှု (သုိ့) အဖွဲ့တစ်ခု ပါတီတစ်ပါတီ(သို့) လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး ရဲ့ကြိုးကိုင် စေခိုင်းခြင်းခံနေရသောသူ ဖြစ်တယ် ဆိုတဲ့လယ်ပြင်မှ ဆင်ကြီး သွားသလိုထင်းကနဲလူတွေသိနေပါတယ်။
- အဲဒီမှာရေးသားထား တဲ့အရေးအသားအရ အမူးသမားကိုဖနှောင့် နှင့် ပိတ်ကန်၍ မေးလိုက်လျှင် ပင် ပအိုဝ်း ဆိုသည်မှာ ခေါင်းပေါင်းနှင့် အနက်ရောင် ၀တ်စုံဝတ်ကြောင်း ပြောပြနိုင်လောက်လေသည် လို့ရေးထားပါတယ်။ အဲဒီ ရေးသားချက်ပာာ သစ္စာရှင် (တောင်ကြီး) ပာာအခြား လူမျိုးဆိုလျှင် ပအိုဝ်း လူမျိုးစုကို အကြီးအကျယ်စော်ကား လိုက်တယ်လို့ဆိုချင် ပါတယ်။ ပအိုဝ်းကို ခွေး (သို့) အရက်သမား လို့ဆိုလိုချင်ပုံ ရပါတယ်။ တော်တော် အမြင်ကျဉ်းတဲ့ လူမျိုးလို့ဆိုချင် ပါတယ်။ ဒါမှမပာုတ်
ဆောင်းပါးရှင်ပာာ ပအိုဝ်း လူမျိုး ထဲက ပအိုဝ်း ဆိုရင်တော့ ကိုယ့်လူမျိုးကို ပြန်စော်ကား လိုက်တဲ့ ကံကြီးထိုက်မဲ့လူလို့ဆိုချင်ပါတယ်၊ ဒေါက်တာ ဆိတ်ဖွားပာာ ဘယ်သူလဲလို့ ပြန်ဖော်ထုတ်နိုင်သလို ဖော်ထုတ်ပြီး ဥပဒေအရ အရေးယူလို့ရတယ်ဆိုတာ မင်သေချာ လေ့လာပါအုံး လို့ပြောချင်ပါတယ်၊ ဆောင်းပါရှင်ပာာပအိုဝ်းလူမျိုးဖြစ်ပြီး လက်ရှိစာရေးနေတဲ့လူကို ကျနော် အနေနဲ့ မှန်းကြည့်လို့မှန်တယ်ဆိုရင် သူကိုယ်တိုင် ပအိုဝ်းလူမျိုး ပင်ဖြစ်ပြီးထို သစ္စာရှင်ပာာ PNO ရဲ့ဖွံ့ဖြိုးမှု အစီအစဉ်နဲ့ရရှိခဲ့တဲ့ ကျောင်းတစ်ကျောင်းကျောင်းမှာ ကျောင်းတက်ပြီး ပညာတတ်တစ်ဦး ဖြစ်လာ မည်မှာဧကန်မလွဲပေ၊ သစ္စာရှင် အဖေ၊အမေ (၂) ဦး ကိုယ်တိုင် ယိုးဒယား (ထိုင်း) ကိုခွေးတိုးပေါက်က ထွက်ပြီး စီးပွားသွားရှာ ကျွန်ခံပြီး ရလာတဲ့ငွေကြေး နဲ့ ကျောင်းတက်ခဲ့တယ်ဆိုတာကို ရိပ်မိပါတယ်၊ ဒါပေမဲ့ မိဘ (၂) ဦးက ပင်ပန်းဆင်းရဲစွာ ရရှိတဲ့ငွေကြေးနဲ့ ကျောင်းထားပေးခဲ့တဲ့ မျက်နှာကိုမထောက်၊ မိဘရဲ့ဆုံးမစကားကို နာမထောင် ဒီမိုကရေစီကိုအကြောင်းပြပြီး ပအိုဝ်းလူမျိုး နှင့် PNO ၊ PNO နှင့် ပအိုဝ်းအမျိုးသား နိုင်ငံရေး မြေးမှိန်အောင် ရေးသားထားသည် ကိုတွေ့ရှိနေရပါတယ် သစ္စာရှင် ကိုယ်တိုင် ကကော ဒီလောက်သွား လာနေပြီးအလုပ် တွေ မအားမလပ်နိုင်အောင် လုပ်ငန်းတွေ များပြီး ငွေကုန်ကြေးကျခံလုပ်နေနိုင်တာ ဘယ်ကငွေကြေးတွေနဲ့ လုပ်နေဒါလဲ? ဧကန္တအခြားတစ် နိုင်ငံ ကတရားမ၀င် ငွေကြေး တွေရယူ သုံးစွဲပြီး လုပ်ငန်းတွေ လုပ်နေတယ်လို့ထင်မြင်ယူဆမိပါတယ်။ ဒါမှမ ပာုတ် သစ္စာရှင်(တောင်ကြီး) ပာာနောက်တစ်ဦးဆိုလျှင်အမတ်ရူးရူးနေတဲ့ လူတစ်ဦးဘဲဖြစ်မှာပါ။ ၂၀၁၅ ရွှေးကောက်မှာလူထုတွေသူကိုမရွှေးမှာစိုးလို့ PNO နှင့် ပအိုဝ်း ၊ ပအိုဝ်း နှင့် PNO ဆိုတဲ့ခွဲခြား လို့မရတဲ့ ညီညွတ်နေမှုကိုအရင်ဖြိုခွဲ ၊ အရင်သိက္ခာချပြီး ၂၀၁၅ အမတ်ဖြစ်ဖို့ရည်ရွယ်နေတယ်ဆိုတာ လူတိုင်း သိ နေပါတယ်။ ၂၀၁၅ ကျရင် အမတ်တော့ဖြစ်မှာပါ စိတ်ချပြီးနေပါသစ္စာရှင် လွတ်တော်အမတ်တော့မဖြစ် ဘူး - ဇာတ်သဘင်၊ အငြိမ့် ထဲက အမတ်တော့ ဖြစ်မှာသေချာတယ်လို့ပြောလိုပါတယ်။
- သစ္စာရှင်(တောင်ကြီး) ပာာတော်တော်လေးကိုနာကျည်းစရာ တစ်ခုကို စဉ်းစားပြီးရေးချလိုက်ခဲ့တဲ့ အ ချက်တစ်ခုကတော့ PNO လူကြီးတွေပာာ ကားကြီး ၊ အိမ်ကြီးတွေဆောက်လုပ်ပြီး စည်းစိမ်နဲ့နေထိုင် နေတယ်၊ မယားငယ်တွေယူတယ်ဆိုတဲ့ အပိုဒ်လေးကလည်း ပါလာပါတယ် လက်ညိုးထိုးပြပါ ဘယ်သူ လဲလို့ တကယ်လို့ယူနေတယ် ယူခဲ့တယ်ဆိုရင်သစ္စာရှင်က ဘာကြောင့်ဒီလောက်မခံနိုင်ဖြစ်နေ တာ လဲ (သစ္စာရှင်ရဲ့ အဒေါ်၊ အမ၊ ညီမ၊ သမီး ပါနေလို့လား၊ ပါနေတယ်ဆိုရင် သစ္စာရှင်ကိုယ်တိုင်ဘဲ အဲဒီ မယားငယ်ယူတဲ့ PNO လူကြီးထံသွားပြီး သစ္စာရှင် ရဲ့အမျိုးတွေကို ပြန်ခေါ်လိုက်ပါလို့ ဒီလောက် ဘဲပြော ချင်ပါတယ် ) သစ္စာရှင် ကိုယ်တိုင်က ကိုယ့်အမျိုးကို ကိုယ်မထိန်းနိုင်ဘဲ သူများကို အပြစ် ပြောဖို့ဘဲ စဉ်း စားနေတော့ ဒီစာသား အတိုင်းပြန်လည်ချေပ ရေးသားရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
- PNO ပာာ ဘာမှမလုပ်ခဲ့ဘူးတဲ့ လူထုအကျိုး အများအကျိုး ဒေသအကျိုးတွေကို ဘာမှမလုပ်ခဲ့ပါဘူးတဲ့ တော်တော်လည်း ရီစရာကောင်းပါတယ် သစ္စာရှင်ကိုယ်တိုင် လူလုံးထွက်ပြပြီးလက်ရှိစာရေးနေတဲ့ ကျနော် ကိုယ်တိုင် တောင်ကြီးခရိုင်၊ လွိုင်လင်ခရိုင်ရှိ နယ်တွေ ဒေသတွေကိုလိုက်ပြပေးပါမယ်။ PNO လက်ရာမကင်းတဲ့ စာသင်ကျောင်းတွေ ဆေးပေးခေန်းတွေ လမ်းတံတားတွေ လက်ညိုးထိုးပြပါ့မယ်။
မ ယုံရင်လူထုကို မေးကြည့်နိုင်ပါတယ် အခုတော့ သစ္စာရှင်ပာာ အင်တာနက်ကိုအသုံးပြုပြီး PNO ကို အ ပုတ်ချနေတယ်ဆိုတော့သစ္စာရှင်ပာာဘယ်လိုလူမျိုးလည်းဆိုတာ အရူးတွေတောင်ခန့်မှန်းလို့ရပါတယ်။
- သစ္စာရှင်ပြောတဲ့ လူငယ်များဆိုတာ ဘယ်လိုလူငယ် တွေလဲ ? ပြောပြပါအုံး ဧကန္တသစ္စာရှင် ပြောတဲ့ လူငယ်တွေဆိုတာ သစ္စာရှင် တို့မလိမ့်တပတ်စည်းရုံးပြီး စုစည်းထားတဲ့လူငယ် ( ၄/၅ ) ဦး လောက်ကို ဆိုချင်တယ်ထင်ပါတယ်။
- သစ္စာရှင် ( တောင်ကြီး) ကိုပြောချင်ပါတယ် အကောင်းအဆိုး အမှား၊အမှန်ကိုလူတိုင်းခွဲခြားတတ်ပါ တယ်၊ မင်းပာာဘာလဲ ? PNO ပာာဘာလဲ? ဆိုတာအချိန် တန်လျှင် ပေါ်ပေါက်လာမှာပါ စိတ်ချနေပါ သမိုင်း က စကား ပြောလာပါ လိမ့်မယ် အဲဒီတော့ PNO ဘာလဲ ? PNO ဘယ်လဲ? ဆိုတဲ့ စကားအရ PNO ပာာ (၁၉၄၉-၁၉၅၈ - ၁၉၆၆-၁၉၇၆) ကနေ စတင်ပြီး ယနေ့အချိန် အထိ ပအိုဝ်းလူမျိုး တွေကို ဦးစီးဦးဆောင်ပြီး နိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ ၊ ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ ဆောင်ရွက်နေဆဲ ဆောင်ရွက်နေတဲ့ လူထုအခြေပြု အဖွဲ့အစည်း ဖြစ်တယ်ဆိုတာ ပြောပြချင် ပါတယ်၊ ရှေ့ ဆက်ပြီး PNO အဖွဲ့အစည်းပာာ တောင်ပေါ် မြေပြန့် မှာ ရှိနေတဲ့ ပအိုဝ်း တိုင်းရင်းသား တွေရဲ့ ရပိုင်ခွင့် တွေကို ဆက်လက် ဦးဆောင်ပြီး တက်လှမ်းသွားဖို့ သံဓိဌာန်ချတယ်ဆိုတာ သိစေချင်ပါ တယ်။
ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတိုင်းမှာ လူသားတိုင်းဟာ ကိုယ်ပိုင်လူ့အခွင့်အရေးဆိုတာ ရှိကြပါတယ်။ လွတ်လပ်စွာ ဝေဖန်ပြောဆိုခွင့်ရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံက ဒီမိုကရေစီနဲ့ဝေးကွာနေတာ နှစ်အတန်ကြာခဲ့ပါပြီ။ ယခု ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်ကို ထူထောင်နေပြီဆိုတော့ လူတိုင်းမှာ ကိုယ်ပိုင်အခွင့်အရေးတွေ ရရှိလာကြပါပြီ။ ဒါကြောင့် လူတိုင်းက ဒီအခွင့်အရေးကနေမှ ကိုယ်လည်းဝေဖန်ချင် သူလည်းဝေဖန်ချင်ဆိုတဲ့ စိတ်ဆန္ဒတွေ ပေါ်ပေါက်နေ
ကြတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ဝေဖန်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာ အကောင်းဖက်ကို ဦးတည်စေချင်တဲ့ ဝေဖန်မှုနဲ့ အဆိုးဖက်ကို ဦးတည်တဲ့ ဝေဖန်မှုဆိုပြီး ရှိမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ အဲတော့ ကိုယ်က ဘာအတွက်ကို ဝေဖန်နေသလဲ ဆိုတာကို သေချာစဉ်းစားစမ်းစစ်ပြီးတော့မှ ဝေဖန်ရေးသားတာ ပိုအဓိပ္ပာယ်ရှိမယ်ထင်ပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်လူ့အခွင့်အရေးအတွက်ကို ဝေဖန်ရေးသားမလား ကိုယ့်လူမျိုးတိုးတက်ဖို့အတွက်ကို ဝေဖန်ရေးသားမလား စဉ်းစားသင့်ပါတယ်။ ဝေဖန်တာနဲ့ ပုတ်ခတ်တာနဲ့ မရောထွေးစေချင်ပါဘူး။ ပုတ်ခတ်တာကိုလည်း တချို့က ဝေဖန်တယ်လို့ ထင်မြင်နေကြတတ်တယ်။ လူမျိုးတိုင်းမှာ ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းခွင့် စာပေ ယဉ်ကျေးမှု ဘာသာ သာသနာ အခြားသောရေးရာများကို ထိန်းသိမ်း ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ အဲဒီအတွက် အဖွဲ့အစည်းလိုပါတယ် ပါတီလိုပါတယ် နောက်ဆုံး လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေလိုမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ မြေမြိုလို့ လူမျိုး မပျောက် လူမြိုမှ လူမျိုးပျောက်ပါတယ်။ ပျုခေတ်ကလိုမျိုး ပျောက်ခြင်းမလှ မပျောက်ရအောင် ကျွန်တော်တို့ အားလုံးညီညွှတ်ဖို့ လိုပါတယ်။ အခြားသော တိုင်းရင်းသားများနှင့် ကောင်းမွန် တဲ့ ဆက်ဆံရေးတွေအတွက် ကောင်းမွန်တဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာ သတင်း ဝေဖန်မှုတွေရှိထားဖို့လိုပါတယ်။ ခေတ်မှီတဲ့ ရင့်ကျက်တဲ့ သဘောထားတွေလိုပါတယ်။ယခုအနေအထားအရ ကိုယ်ရဲ့ကိုယ်ပိုင် Felling ခံစားချက်ထက် လူမျိုးအတွက် ပိုစဉ်းစားသင့်ပါတယ်။ ပထမဦးစွာ လူမျိုးရဲ့ပါတီအတွက်အရင်စဉ်းစားသင့်တယ်လို့ထင်ပါတယ်။
ခေတ္တ - ဂျပန်
လူတိုင်းက အခွင့်အရေးရှိကြပေမဲ့ ၊ အခွင့်အရေးတိုင်းအပေါ်မှာ တာဝန်ယူမှု တာဝန်ခံမှုဆိုတာ အမြဲရှိနေရမှာပဲ... ဝေဖန်တာပဲသိပြီး ကိုယ့်စကားကို တာဝန်မယူနိုင်ရင်တော့ ဒါမတရားတာပါပဲ...